Mourinho Oo Dagaalkii Ugu Horeeyay Ku Guulaystay. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Maxaa Cusub » Mourinho Oo Dagaalkii Ugu Horeeyay Ku Guulaystay.
Mourinho Oo Dagaalkii Ugu Horeeyay Ku Guulaystay.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 15-06-16 12:53 PM Tababaraha cusub ee Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ku guulaystay dagaalkiisii ugu horeeyay isaga oo ah macalinka Man United, wuxuuna Old Traffrod ku sii haysan doonaa goolhaye David De Gea oo aan xagaagan ku biiri doonin Real Madrid. Mourinho ayaa Old Traffrod soo gaadhay iyad aoo mustaqbalka De Gea uu muqdi wayni ku jiro.
Sida ay ku warantay jariirada Madrid ka soo baxda ee AS, David De Gea ayaa go’aan ku gaadhay in aanu xagaagan ku biirin Real Madrid isla markaana uu qayb ka noqdo mashruuca cusub ee Old Traffrod uu ka wado Mourinho. De Gea ayaa xagaagii hore qarka u saarnaa in uu noqdo ciyaartoy Real Madrid ah laakiin heshiiskii uu Madrid la gaadhay ayaa burburay daqiiqadii suuqa kala iibisaga ugu danbeeysay.
Kadib markii uu burburay heshiiskii Manchester United iyo Real Madrid, David De Gea ayaa saxiixay heshiis cusub oo Manchester United markii hore ka diiday laakiin waxaa heshiiskiisa cusub ku jiray qodob Real Madrid u ogolaanayay in ay xagaagan la wareegi karto De Gea haddii ay bixiso lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo oo lagu sheegay ilaa 50 milyan oo euros.
Si kastaba ha ahaatee, qodobkii heshiiska De Gea ku jiray ee Real Madrid fursada u siinayay in ay De Gea xagaagan la wareegikarto ayaa dhacaya maanta oo ay taariikhdu tahay 15/06/2016. Sidaa daraadeed Real Madrid ayaa la filayaa in ay sidaa ku waayayso xagaagan saxiixa De Gea.
Manchester United ayay farxad u noqonaysaa in De Gea uu go’aansaday in aanu xagaagan ka bixin Old Traffrod isaga oo goolhayaha ree Spain saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay uu ahaa xidiga xili ciyaareed kasta ugu fiicnaa Red Devils. Zidane ayaa si wayn u aaminsan goolhaye Keylor Navas oo Real Madrid ka caawiyay in ay ku guulasato Champions Leaque-ga bale madax wayne Perez ayaa si wayn u doonayay De Gea.
Warka ugu fiican ayaa Manchester United u ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 15/06/2016 uu dhacayo qodka Real Madrid u ogolaanayay in ay soo dalban karo saxiixa De Gea laakiin ilaa hadda inta la ogyahay ma jiro wax dalab ah oo Real Madrid gudbisay, sidaa daraadeed De Gea ayaa la filan karaa inuu xili ciyaareedka cusub uu ka soo muuqan doono shaxda Mourinho.